Haddii hal tufaax ah uu qiimihiisu yahay 3 kr, laba tufaaxna 6 kr, waa in markaasi saddex tufaax ay qiimahoodu noqdaan 9 kr. Waa tusaale muujinaaya xiriirka saamigalka toosan. Lacagta tufaaxa waxay la kordheysaa tirada tufaaxa.
Ka dhig adiga oo 20 qofood u sameynaaya doolsho. Markii aad 20 qofood u sameysay doolasha, ayaa waxaad ku fikirtay in aad 60 qofood oo kale u sameysid doolsho, ayada oo ka qiyaas qaadanaayo 20-kii qofood ee hore.
Haddii aad rabtid in aad sameysid tiro doolsho ah oo intaas ka yar ama ka badan waxaad isticmaaleysaa saamigalka toosan.
20 xabbo oo doolsho ah.
1/2 baakad qamiir ah (50 g)
50 g oo subag ah
3 dl oo caano ah
0,5 dl sokor ah
1 krm oo cusbo ah
8 dl oo bur ah
Kulmiye wuxuu ka shaqeeyaa dukaan, wuxuuna mushaar ahaan saacaddii u qaataa 70 kr. Laba saacadood ka kadib wuxuu shaqeystay 140 kr, saddex saacadood ka dibna 210 kr.
Mushaarka Kulmiye marka la garabdhigo saacadaha uu shaqeeyo waxaa la arkayaa in ay leeyihiin xiriirka muujinaaya saamigalka toosan. Waxaana la oran karaa mushaarka Kulmiye waxa uu la kordhayaa tirada saacadaha uu shaqeeyo.